यस्ता ५ प्रकारका व्यक्तिलाई भुलेर पनि साथी नबनाउनुहोस् । पाइएला दुख…(पुरा पढ्नुहोस्) – ताजा समाचार
एजेन्सी – मानिस भनेको एक सामाजिक प्राणी हो । ९ महिना आमाको पेटमा रही गर्भ बाट धर्तीमा पाइला टेके सँगै उ विभिन्न भूमिकामा परिभाषित हुन्छ । कसैको छोरा, छोरी, नाति नातिनी, भाइ बहिनी, आदि । त्यो व्यक्ति जब ठुलो हुँदै जान्छ, अनि रगत सँग कुनै साइनो नजोडिएकाहरू पनि उसको जिन्दगीमा जोडिन् आउँछ एक साथी बनेर। साथीको सम्बन्धलाई एकदम पवित्र र मनको नाताको रूपमा बुझ्ने चलन छ । केही साथी यती फलदायी हुन्छन् जुन साथीको सङ्गत र उसले देखाएको बाटोका कारण निकै व्यक्ति सफल भएका छन् ।
उदाहरण यस्तो पनि पाइन्छ, कतिपय संगतकै कारण पतित भएर गएका छन् । त्यसैले जहिले पनि असल व्यक्तिको मात्रै संगत गर्नुपर्छ । यहाँ हामीले यस्ता पाँच प्रकारका व्यक्तिहरुको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ, जस सँगको संगत तपाइँलाई कहिल्यै फलदायी हुँदैन ।
१. सधैँ आफ्नै कुरा लाद्नेः साथी यस्तो हुनुपर्छ, जसले तपाइँलाई साथ देओस् । तपाइँको कुरा पनि सुनोस्, न कि हाकिमको जस्तो ब्यबहार गरोस् । हरेक कुरा आफ्नो मात्रै लाद्न खोज्ने साथी बनाउँदा तपाइँलाई जिन्दगीमा केही फाइदा हुँदैन, हुन्छ त केवल घाटा मात्रै ।
३. अफ्ठ्यारोमा साथ नदिनेः हामी सबैको साथमा आ आफ्नो जरुरी काम त हुन्छ नै, तर सच्चा साथीले आवश्यक पर्दा तपाइँलाई साथ दिनुपर्छ । कोही त्यस्तो व्यक्ति जो तपाइँलाई अति आवश्यक पर्दा पनि व्यस्त रहेको बहाना बनाएर साथ दिँदैन भने त्यस्तो साथीको संगत पनि छाडिदिनुस् ।
कन्या राशि: कन्या राशिको बारेमा ज्योतिषको भनाई छ कि कन्या राशिको महिलाहरू आफ्नो प्रेमीसँग कुनै पनि कुरा लुकाएर राख्दैनन् र यसकारण यिनीहरू आफ्नो प्रेमीबाट यहि अपेक्षा राख्दछन् ।यस राशिका मानिसहरू खुला विचारका हुन्छन् । यसकारण यस राशिको मानिसको गलत फाइदा पनि उठाउने गर्दछन् ।
कुम्भ राशि: कुम्भ राशिको मानिसको बारेमा भनिएको छ कि यी मानिसहरू अरू भन्दा बढी आकर्षक देखिनका लागि निकै मेहेनत गर्दछन् । यदि यी मानिसलाई कसैले वेवास्ता गरेमा यिनीहरू चाँडो रिसाउने गर्दछन् । आफूलाई अरू भन्दा बढी राम्रो देखाउनका लागि यिनीहरू कुनै पनि हद सम्म जान सक्छ । यसकारण प्रायजसो यहि कारणले यिनीहरू आफ्नो प्रेमीलाई धोका पनि दिने गर्दछन् ।